खुशीको खबर : ४८ घण्टामै को’रोना निको पार्ने औ’षधीको आ’विष्कार गरेको अस्ट्रेलियाकी वैज्ञानिकको दा’वी…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : अहिले को’रोना भाइ’रस विश्वभरी महामा’रीको रुपमा फै’लिइरहेको छ । पूरै विश्वका वैज्ञानिकहरु यसको औ’षधीको खोजीमा जु’टिरहेका छन् । अहिलेसम्म यो भाइर’सको औ’षधी बनिसकेको छैन ।
तर, अस्ट्रेलियाकी एक वैज्ञानिकले यो भा’इरसको सं’क्रमण निको पार्नको लागि आफूले अत्य’न्तै प्र’भावकारी औ’षधीको आ’विष्कार गरेको दा’वी गरेकी छिन् ।यी वैज्ञानिकले आफ्नो एक अनु’सन्धानपछि टाउकोमा पर्ने जुम्रा मा’र्न प्रयोग गरिने औ’षधीमा प्रयोग हुने र’सायनबाट को’रोनाभा,इरस मा’र्न सकिने बताएकी छिन् ।
अस्ट्रेलियाको मो’नाश विश्वविद्यालयको बा’योमेडिसिन डि’स्कभरी इन्स्टिच्युटकी वैज्ञानिक डा. काइली वागस्टफले जु’म्रा मा’र्न प्रयोग हुने औ’षधीको र’सायनबाट बन्ने औ’षधीले केवल ४८ घण्टामै को’रोनाभा’इरस मा’र्न सकिने बताएकी हुन् ।
उनको यो खोजलाई विश्वविद्यालयले आफ्नो वेबसाइटमा प्र’काशित गरेको छ ।डा. वागस्टफका अनुसार जुम्रा मार्न प्रयोग हुने यो औ’षधीमा इ’भरमेक्टिन नामको र’सायन प्रयोग हुन्छ । अ’नुसन्धानपछि प्राप्त नतिजाको आ’धारमा उनले यो औ’षधीको एक डो’जले नै को’रोनाभाइर’सलाई मा’र्न सकिने दा’वी गरेकी छिन् ।
यतिमात्र होइन उनका अनुसार यो औ’षधी दिएको २४ घण्टाभित्रै बि’रामीको शरीरमा भाइरस मर्ने क्रम सुरु हुन्छ ।यो अनुस’न्धानलाई त्यहाँको ए’न्टिभाइरल पत्रिकामा पनि प्रका’शित गरिएको छ । डा. वा’गस्टफले अहिलेसम्म यो म’हामारीको कुनै ठो’स उपचार नभएकोले जबसम्म को’रोनाभा’इरस रोक्ने भ्या’क्सिन बन्दैन तबसम्म यो औ’षधीलाई प्रयोग गर्न सकिने बताएकी छिन् ।
उनका अनुसार ए’न्टि प्या’रासाइटिक औ’षधी प’रजीविबाट हुने रो’गलाई समाप्त गर्न सक्छन् । उनले यो प’रजीवि प्र’तिरोधी औ’षधीको प्रयोग यसअघि ए’चआइभी, डें’गु, इ’न्फ्लुएन्जा र जीका भा’इरसको उप’चारमा पनि प्रभा’वकारी रुपमा गरिएको दा’वी गरेकी छिन् ।